Home News Madaxweynayaasha Suudaan iyo Jabuuti oo gaaray Adis-ababa (SAWIRO)
Waxaa maanta magaalada Jimma ee Ismaamulka Oromada dalka Itoobiya si heer sare ah loogu soo dhaweeyay Madaweynayaasha dalalka Jabuuti iyo Sudan Ismaaciil Cumar Geelle iyo Cumar Xasan Al-Bashiir.
Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo madax kale oo katirsan dowlada Itoobiya ayaa kusoo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Jimma Madaxda wadamada Suudaan iyo Jabuuti .
Madaxweynayaasha Jabuuti iyo Suudaan ayaa lagu casuumay ka qeyb galka daah furka mashaariic horumarineed oo laga hir galiyay magaalada Jimma, waxa ay sidoo kale ka qeyb gali doonaan munaasabad weyn oo magaaladaasi ka dhaceysa.
Madaxda Wadamada Itoobiya, Jabuuti iyo Sudan ayaa sidoo kale lagu wadaa in ay yeeshaan wadahadalo sadex geesood ah oo looga hadlayo isbadalka Geeska Afrika iyo idii loo xoojin lahaa xiriirka sadexda wadan ka dhaxeeya.
Ra’isul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed ayaa isbadal weyn ka hirgaliyay dalka Itoobiya iyo guud ahaan Geeska Afrika, waxa uuna abuuray Ra’isul Wasaaraha jawi ka badalan kii hore looga bartay Itoobiya iyo guud ahaan Geeska Afrika.
Previous articleWax-badan ka ogoow sababta uu u baaqday Maanta kulankii golaha shacabka
Next articleGudoomiye Mursal oo kulan xasaasi ah la qaatay Safiirka Dowladda Uk u fadhiya Soomaaliya
Dowladda Soomaaliya oo ka qeyb galeysa shirka nabada aduunka